[Ankapobeny ] 15 Aogositra, 2008 18:15
Andeha sa tsy andeha?
Vakansy ny andro te mba hiala sasatra i news2dago! maro anefa ny zavatra tsy maintsy homanina sy ilana paikady tsara vao tena afaka mandeha. Eo ohatra ny vola atotona @ ity vakansy ity ze aleha tokoa vola daholo. Manaraka izay ny toerana, maro ny toerana efa nitsidika tato an-tsaina kanefa toa tena tsy hitako izay haleha.
Ambila sa Folopointy samy tsara kanefa misy lafy ratsiny daholo Ambila ohatra dia ilay milahatra baka no tsy reviko any dia tsy kaonty iny zany aloha. Folopointy avy foana hono ny orana any! tsy afaka hilalao rano zany fa sao manavy eo. Vatomandry sa Mahanoro? Vatomandry tsy dia misy toerana afaka hilalaovana rano sy hilomanosana torak'izany koa i Mahanoro. Raha ho any Mahajanga anefa toa ohatra ny lavitra loatra ka tsy hatanty rafotsy satria mavesatra entana! teraka an-dalana eny zay vao loza eo.
Raha mijery ny ho entimanana indray aho anefa dia toa tena handany vola be ihany vao afaka ny hiala sasatra, ny vola anefa mety tena ilaina ao aorina kely ao rehefa tonga ny vahiny. Dia angamba izahay tsy andeha indray fa hitanin'andro etsy antokotany fotsiny sisa.
Lalina ihany izy ity ka taloha mantsy dia tsy mba notazaina t@ izany vakansy izany izahay ny tena moa zanaka mpiasa ny lalamby taloha ka tsy nisy afatsy Antsirabe sy Toamasina no falehako ary Ambatondrazaka dia indray mandeha monja aho no mba tany. Manakara moa dia mbola tsy hitako mihitsy. Izao kosa efa mitokatrano ka dia miova ny fiainana lasa mandeha vakansy foana matetika ny tena fandehananay dia rehefa farany volana septambra eo mantsy tsy manahirana ny mitady trano satria efa tapitra mody ireo mpiala sasatra. Dia aleo @ taona manaraka indray e!